ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်လုံခြုံမှုရှိစေရန် DPP ဆုချီးမြှင့်သည့်အနီရောင်ပျားမီဒီယာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အနီရောင်ပျားမီဒီယာပီပီထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံမှုအထိမ်းအမှတ်ကျူးလွန်ချီးမြှင့်
အနီရောင်ပျားမီဒီယာမတ်လ 2019 ၏အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လုံခြုံရေးအမှတ်အသားမှကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပီပီချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပီပီမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်ရှိဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဤသည်မှာလက်မှတ်ဦးစားပေးများနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်မှလိုက်နာရန်အတွက်အနီရောင်ပျားမီဒီယာကနေဆက်လက်ကတိကဝတ်ပြသထားတယ်။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပီပီနှစ်ခုရှိပြီးသားစာရွက်စာတမ်းများ, တစ်ဦးအပေါ်အခြေခံပြီး, 2017 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် ပေးသွင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း, ပီပီအဖွဲ့ဝင်များကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့, နှင့် ထုတ်လွှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များ, NABA (မြောက်ပိုင်းအမေရိကန်လူငယ်ကဏ္ဍအစည်းအရုံး) နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသံလွှင့်အတွက်ပေးသွင်းဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဆီသို့ဦးတည်ကတိကဝတ်ကိုသရုပ်ပြခွင့်ပြုပါတယ်။
"အနီရောင်ပျားမီဒီယာအပြည့်အဝဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဦးစားပေးဖို့နဲ့ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှလုံခြုံန်ဆောင်မှုပေးအပ်အတွက်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကျူးလွန်ကျနော်တို့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လုံခြုံရေးအမှတ်အသားမှကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပီပီချီးမြှင့်ခဲ့ကြဂုဏ်ယူနေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ " ဒါဝိဒျ Says Travis, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Portfolio အရာရှိ, ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများ, အနီရောင်ပျားမီဒီယာ။
လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပီပီအတွက် Marks ချီးမြှင့်ခံရဖို့, နီပျားမီဒီယာရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ကျွမ်းကျင်သူများကသုံးသပ်အတည်ပြုခဲ့သော 66 လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုနဲ့ Self-အကဲဖြတ်မေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့နှင့်ပီပီအဖွဲ့ဝင် Eurofins ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ခြင်း။
"အနီရောင်ပျားမီဒီယာအဆိုပါစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းထိန်းချုပ်မှုမှအသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုပေးနှင့်ထုတ်လွှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပိုမိုလုံခြုံအောင်မှပံ့ပိုးအတွက်စစ်မှန်သောကတိကဝတ်ပြသထားပါတယ်" Rowan က de Pomerai, Delivery & ကြီးထွား, ပီပီ၏ဦးခေါင်းကပြောပါတယ်။ "ဒီနေ့နီပျားမီဒီယာဟာပီပီလုံခြုံရေးအမှတ်အသားများကိုကိုင်ထားကြောင်းရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်ကုမ္ပဏီများသည်တစ်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာအသိုင်းအဝိုင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ "
အနီရောင်ပျားမီဒီယာမတ်လ 2019 အတွက်လုံခြုံရေးအမှတ်အသားများမှကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပီပီချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
Jesper Wendel, ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှူး, နီပျားမီဒီယာ
အနီရောင်ပျားမီဒီယာထက်ပို 2500 မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လန်ဒန်, ဗြိတိန်တွင်ဦးခေါင်းရုံးနှင့်အတူအနီရောင်ပျားမီဒီယာကမ္ဘာတဝှမ်း 11 အဓိကအချက်အချာကနေန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူအပေါင်းတို့တိုက်ကြီးပေါ်မှာလူတွေသန်းပေါင်းများစွာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ, ကိုပြင်ဆင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အနီပျားမီဒီယာန်ထမ်းများကထုတ်လွှင့်ကြည့်ပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, စီးပွားရေး4တီဗီလိုင်းများကိုကျော်ဘို့ 60 + ဘာသာစကားများထက် သာ. 500 ပရိုဂရမ်းမင်း၏သန်းနာရီကယ်တင်တတ်၏။ အနီရောင်ပျားမီဒီယာရဲ့ OTT န်ဆောင်မှု 233 သန်းစာရင်းသွင်းသူပေးထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် 119 ကို standalone ချန်နယ်များအတွက် 1.7 လိုင်းများ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ transcoding ပါဝင်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အကြောင်းအရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအစုစုကိုပိုပြီးသန်း 10 ထက်ရုပ်ရှင်နှင့်အစီအစဉ်ကိုခေါင်းစဉ်, 25 ဘာသာစကားများကျော်ဖုံးအုပ်နှင့်ရိုးရာတီဗီ, VOD နှင့် SVOD ဖြတ်ပြီးမရရှိနိုင်သမျှသောပရိုဂရမ်းမင်း၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျော်နှင့်အတူပုံတစ်ပုံကိုဒေတာဘေ့စပါဝင်သည်အထိချဲ့ကာ။ အနီရောင်ပျားမီဒီယာကိုလည်းနှစ်စဉ်စာတန်းထိုး၏ 200,000 နာရီကျော်ထောက်ပံ့ - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်သော၏ 70,000 နာရီထက် ပို. ။ အနီရောင်ပျားမီဒီယာမတူကွဲပြားမှုလက်ခံနှင့်တစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့အစည်းကတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးအားလုံးပါဝင်နိုင်အလုပ်ခွင်အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အာရုံနှင့်အတူတန်းတူအခွင့်အလမ်းအလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ www.redbeemedia.com
အဆိုပါပီပီမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဆိုပါပီပီ, ထိုးထွင်းသိမြင် generate ပြောင်းလဲမှုကို enable နှင့်စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးရန်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ၏စုပေါင်းထောက်လှမ်းရေးထဲကနေအလားတူ, တပြင်လုံးကိုမီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အထိချဲ့ထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူမများအတွက်အကျိုးအမြတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းကိုမေးလျှောက် thedpp.com
Ericsson ကအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Red Bee သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအစီအစဉ်ကို DPP ၏မိတ်ဖက်ဖြစ်လာသည် - ဇွန်လ 16, 2020
Red Bee သည်ဘီစီဘီစီပါရှန်းနှင့်အာရဗီရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကိုဖွင့်သည် - မေလ 5, 2020
Red Bee သည်မြောက်အမေရိကရှိ TitanTV နှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးချဲ့သည် - ဧပြီလ 23, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-05-24
ယခင်: ဟောလိဝုဒ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် Named ဖီးလ် Kubel
နောက်တစ်ခု: ဗွီဒီယို Products Association